ဘယ်အိုင်ဖုန်းကဘယ်ကုမ္ပဏီလဲဆိုတာကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ၊ သော့ဖွင့်လို့ရမလား။ | အိုင်ဖုန်းသတင်း
ဂွန်ဇာ R. | | အိုင်ဖုန်းသတင်း
¿အိုင်ဖုန်းတစ်ခုဘယ်ကုမ္ပဏီလဲ? လူအများစုကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန်ပုံစံသို့မဟုတ်လူမှုကွန်ယက်များတွင်မည်သို့မေးမြန်းကြသနည်း ဘယ်ကုမ္ပဏီက iPhone လဲဆိုတာရှာပါသင်နှင့်ချည်နှောင်ထားသည့်မူလအော်ပရေတာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုမေးမြန်းသူအများစုသည် iPhone ကိုဒုတိယသုံးစျေးကွက်တွင် ၀ ယ်ယူပြီး၎င်းသည်အော်ပရေတာတစ်ခုတည်းနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်ကိုမသိသောကြောင့်၎င်းအချက်အလက်များကိုမသိရှိကြပါ။ ၎င်းသည်အခြားအော်ပရေတာများနှင့်သို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုတွင်အသုံးပြုရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ တိုင်းပြည်။
iTools ကိုအသုံးမပြုမီ၊ iPhone4မှဤကိရိယာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မူလဇာစ်မြစ်ကိုရှာနိုင်သည်၊ Apple server တွင်သာသိမ်းဆည်းထားသောကျန်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့မသိနိုင်ပါ။ မည်သည့်ကုမ္ပဏီအတွက်၎င်းသည်အမြဲတမ်းစာချုပ်ရှိပါက၎င်းကိုဖြန့်ချိပြီးပါက၎င်းကိုပိတ်ထားသည် အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ IMEI မှမည်သည့်အော်ပရေတာတွင်မဆိုအသုံးပြုရန်လွှတ်ပေးပါကဖြစ်သည်။
မည်သည့်ကုမ္ပဏီသည်အိုင်ဖုန်းဖြစ်သည်ကိုသိရန် ၀ န်ဆောင်မှုများ
ဤသတင်းအချက်အလက်များကို Apple ၏ဆာဗာများမှတဆင့်ရယူနိုင်သောကုမ္ပဏီများရှိသည်။ ယူရိုအနည်းငယ် (သို့မဟုတ်ဒေါ်လာဒေါ်လာ) ဖြင့်သူတို့သည် Apple ၏ဆာဗာတွင်ရှိသော iPhone မှဒေတာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့လိမ့်မည်။ ဤအချက်အလက်အားလုံးကိုသင်တောင်းခံနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဝန်ဆောင်မှုကိုဖွင့်ပါ သင်၏အိမ်မှမိနစ်ပိုင်းအတွင်းသင့်အီးမေးလ်ဖြင့်လက်ခံပါ။ IMEI မှခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်ငွေမပေးခြင်းအတွက်သင်၏ iPhone ကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်သင်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
ဤအချက်အလက်အားလုံးနှင့်သင်အပိုင်းကိုသာရိုက်ရမည် iPhone ကို IMEI ဖွင့်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်ထားပြီးဖြစ်သောသင်၏အော်ပရေတာကိုရွေးချယ်ပါ။ နာရီအနည်းငယ်အတွင်းသင်၏ iPhone သည်အမြဲတမ်းအခမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။
အိုင်ဖုန်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရှာဖွေခြင်းကသင့်ကိုကူညီနိုင်ပါတယ် ဖုန်းမ ၀ ယ်ခင်ဒီပစ္စည်းဟာအခမဲ့လား၊ သော့ခတ်ထားလားဆိုတာစမ်းစစ်ပါ, သင်သည် iPhone ၏ IMEI အတွက်ရောင်းချသူကိုသာမေးမြန်းရန်လိုအပ်ပြီးထိုအချက်အလက်နှင့် ပါတ်သက်၍ သင်နှင့်ပါတ်သက်သည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုရှာဖွေနိုင်ပြီး၎င်းသည်သင့်အားလိမ်လည်လှည့်စားခြင်းမရှိကြောင်းစစ်ဆေးနိုင်လိမ့်မည်။ modelo, အ စွမ်းရည်အဆိုပါ အရောင်အဆိုပါ နံပါတ်စဉ်သူ အော်ပရေတာမင်းရှိရင် စာချုပ် တွဲဖက်, etc အကယ်၍ ၎င်းကို IMEI မှဖြန့်ချိနိုင်ပါက၎င်းကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နှင့်မည်မျှကုန်ကျမည်ကိုလည်းသင်သိလိမ့်မည်။
သင်၎င်းကို ၀ ယ်ပြီးသားဖြစ်ပြီး၊ မည်သည့်ကုမ္ပဏီမှမည်သည်ကိုမသိပါသို့မဟုတ်လိမ်လည်မှု၏သားကောင်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုသင်ထင်လျှင်၎င်းကိုစစ်ဆေးပြီးသံသယများကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ရောင်းသူကိုပြောပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့မ ၀ ယ်ခင်မစစ်ဆေးမီသင်အမြဲစစ်ဆေးသင့်သည်၊ ထို့ကြောင့်မလိုအပ်သောစိတ်အနှောင့်အယှက်များကိုရှောင်ရှားနိုင်မည်။
သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပေးအပ်ထားသောဤသတင်းအချက်အလက်အားဖြင့်သင့်အားရှင်းလင်းပြီးသားဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည် ဘယ်ကုမ္ပဏီကအိုင်ဖုန်းဆိုတာဘယ်လိုသိလဲ ယခုအချိန်တွင်အသုံးအများဆုံးမှာ terminal သည်အခမဲ့ဖြစ်ပြီးမည်သည့်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာနှင့်မဆိုကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - iPhone ကို IMEI ဖွင့်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းတစ်ခုဘယ်ကုမ္ပဏီလဲ
27 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ပြီးပြည့်စုံတဲ့၊ ငါကြိုးစားပြီး ၁၀ မိနစ်အတွင်းမှာအချက်အလက်တွေရခဲ့တယ်
အခုငါလဲသွားပြီ ... ဒီအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုမင်းကိုပြောပြတဲ့ကွန်ပျူတာပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးလား။ IMEI လိုမျိုးလား။
mmmmm ဤအချက်အလက်သည်စာမျက်နှာများစွာမှကင်းလွတ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Iphoneox.com
၂၀၁၂ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှစပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည်။ Cydia တွင်အပြောင်းအလဲရှိခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာအထိအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ လွတ်လပ်သောစာမျက်နှာများမဟုတ်သကဲ့သို့ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်း၌အချက်အလက်များကိုပေးသောတရုတ်စာမျက်နှာလည်းရှိသည်။ ၃ ရက်လောက်မှာပဲအော်ပရေတာမှာအကြွေးတင်ထားတဲ့ခိုးသွားတဲ့ iPhone ဒါမှမဟုတ် iPhone ဝယ်ဖို့ ၀ န်ဆောင်ခကိုပေးချင်တယ်။ iTools ကအတိအကျတော့မဟုတ်ပါဘူး။ iPhone 2012 ကနေထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံပါ။ ဥပမာ - iPhone 3G Movistar Venezuela iTools ပါ။ ၎င်းသည်ဂွာတီမာလာ / ဟွန်ဒူးရပ်စ်မှဖြစ်ကြောင်း ၄ င်း၏အိုင်ဖုန်း4/ 3S Movistar Venezuela iTools က၎င်းတို့သည်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏အိုင်ဖုန်းတွင်မည်သည့်နေရာမှကျော်ကြားသည်၊ iPhone မော်ဒယ်ကိုထည့်သွင်းထားသောနေရာ၊ ၄ / 4S Movistar Venezuela နှင့် အချို့သော Digitel ဗင်နီဇွဲလားမှာအခမဲ့စာမျက်နှာများသို့မဟုတ် iTools ရှိပါက iPhone သတ်မှတ်ချက်များကိုသိရှိရန် Telcel Mexico ကဲ့သို့ထွက်လာသည်။ သို့သော်မည်သည့်အော်ပရေတာကမည်သည့်အော်ပရေတာမှဖြစ်သည်၊ iPhone မရှိ, နှုတ်ခွန်းဆက်သ
အိုင်ဗင် Zetina ဟုသူကပြောသည်
မက္ကဆီကိုရှိအော်ပရေတာ iusacell နှင့်အတူ imei မှထုတ်လွှင့်ရန်ကျွန်ုပ်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
Ivan Zetina အားပြန်ပြောပါ
3XXXX မှ စတင်၍ Iusacell iPhone 4/4 / 5S (iPhone 0127 မဟုတ်) imei သာသော့ဖွင့်နိုင်သည်
Mario burga ဟုသူကပြောသည်
လေလံဆွဲသူများကိုရှာဖွေရန်ဒေါ်လာ ၁.၀၀ မှကောက်ခံသောအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိပါကယူရို ၃.၉၅ (ဒေါ်လာ ၅.၀၀) ကိုပေးချေရန်ကျွန်ုပ်သည်ဤအရပ်သို့လာမည်။
အကယ်၍ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်နာမည်ကောင်းမရသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းမပြုပါက၎င်းသည်သင့်ထံမှ ၀ န်ဆောင်မှုလည်းမဟုတ်ပါ။
Mario Burga သို့ပြန်သွားပါ
အဲဒီမှာသင် http://iphonefrom.com/es/ နိုင်ပါတယ်
2.- * 3001 # 12345 # * သို့ခေါ်ဆိုပါ။ (၎င်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖွင့ ်၍ စစ်မှန်သောခေါ်ဆိုမှုမပြုလုပ်ပါ)
၃။- ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း app ကိုဖွင့်လိမ့်မည်။
4. MM MM Info သို့သွားပါ၊ ထို့နောက်“ Equivalent PLMN List” သို့သွားပါ
၅။ ဒေတာများကိုဘေးဖယ်ထားပါ (Mobile Country Code သည် MCC နှင့် Mobile Network Code MNC)
6.- သွားပါ http://mcclist.com/mobile-network-codes-country-codes.asp နှင့် Ctrl / Command + F နှင့် MCC ကိုရှာဖွေပါ။ MNC သည်အော်ပရေတာ၏အမည်ဖြစ်ပြီးအော်ပရေတာ၏နိုင်ငံကိုသင်သိလိမ့်မည်။
Aaron Abensur ဟုသူကပြောသည်
ငါ့ iPhone5မှာ Equivalent PLMN List မှာဘာမှမရှိဘူး။ ဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။
Aaron Abensur အားပြန်ပြောပါ
ငါသုည * 3001 ......
cesar neri အားစာပြန်ပါ
အကောင်းဆုံးကတော့ Apple Care ကိုခေါ်တာပါ၊ အဲဒီမှာသူတို့ကသင့်အချက်အလက်အားလုံးကိုပြောပြတယ်
ခေါ်ဆိုမှုကုန်ကျကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဖုန်းနံပါတ်ကိုမည်သို့ခေါ်ရမည်ကိုသင်သေချာစွာသိပါသည်။ 🙂
(စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့်အခြား ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကိုထုတ်ဝေရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ )
Movistar Mexico မှ iPhone ကိုသော့ဖွင့်ရန်လည်းထို option ကိုထည့်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၎င်းသည်၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းထားခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အိုင်ဖုန်း၏သော့ဖွင့်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုသည်တည်ငြိမ်မှုမရှိသောကြောင့် Telcel Mexico ကိုလွန်ခဲ့သော ၁ လကမှအချိန်တိုအတွင်းကမ်းလှမ်းခဲ့သော်လည်းတစ်ခုတည်းသောအော်ပရေတာမဖြစ်နိုင်ပါ။ သင်၏ imei သည် 1XXX မှစတင်သည်။ iPhone သည်ဖြစ်ရမည်။ ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံဖြစ်သောဗင်နီဇွဲလားတွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ သင်၏တိုင်းပြည်တွင်ရောင်းချခြင်းရှိ၊ မရှိကိုရှာဖွေသည်၊ နှုတ်ခွန်းဆက်သသည်။
လမ်းပေါ်မှာ iohine5ကိုရှာတွေ့တယ်။ ပိုင်ရှင်ကအဲဒါကို imei ကပိတ်ဆို့လိုက်တာလို့သူတို့ပြောတယ်၊ ငါ့မေးခွန်းက - ဒီနေ့ခေတ်မှာထုတ်လွှင့်လို့ရမလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဥရုဂွေး
Silvio Rosario ဟုသူကပြောသည်
Silvio Rosario ကိုပြန်သွားပါ
Bora Bora ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ သင့်တွင်မက္ကဆီကို၌ imei မှခိုးယူမှုသတင်းရှိသည်ဆိုပါက၎င်းကိုသော့ဖွင့်လို့ရမလား။
ငါ့မှာ iPhone နှစ်ခုရှိတယ်။ ၄ နဲ့ ၄ ကငါ့မှာ iPhone ၂ ခုရှိတယ်။ သူတို့ဘယ်ကုမ္ပဏီကနေသူတို့ကိုယ်တိုင်လွတ်မြောက်နိုင်မလဲဆိုတာငါဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ နှစ်ခုစလုံးက activation mode မှာရှိနေပြီးပါရာဂွေးမှာ ipod touch အနေနဲ့သုံးလို့မရဘူး။
www.blogitecno.com ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
စိတ်ဝင်စားဖွယ် Post ကို
ကျွန်ုပ်သည် Verizon iPhone သို့ cdma movilnet လိုင်းကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါသလား။
မားကို့စ Tadeo Valenzuela ဟုသူကပြောသည်
Marcos Tadeo Valenzuela အားပြန်ပြောပါ
ရှမွေလသည် rodriguez ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းအစ်ကို Scout မှဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဖုန်း ၆ ကို ၀ ယ်ခဲ့တယ်။ ဗင်နီဇွဲလားကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာယူဆောင်လာပြီး Movistar sim ကိုပေးလိုက်တယ်။ ငါဘယ်လိုထုတ်လွှတ်ရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာရှာမနေဘူး၊ အနက်ရောင်စာရင်းထဲမှာဘာမှမရှိဘူး၊ iCLoud မှဒီနေရာတွင်မည်သည့်ဖြေရှင်းနည်းများရှိကြောင်းသိလျှင်ပိတ်ဆို့ထားပါ၊ ကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်ပါ
Samuel rodriguez အားပြန်ပြောပါ
ငါဝင်ရောက်ရန်ကြိုးစားပေမယ့် google ကြော်ငြာငါ့ကိုတိုးတက်ခွင့်မပြုပါဘူး
စတိဗ်ဂျော့စ်မှအသံဖြင့်အသံလွှင့်ပြီးသြဂုတ်လအတွင်းက Apple Park ၌မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ပျံသန်းသည်
Instagram သည်လူနှစ် ဦး အကြားတိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်မှုကိုစမ်းသပ်နေသည်